Intuthuko Yenyuvesi »IHodges University
Indima yomnyango Wokuthuthuka Kweyunivesithi ukuhlakulela ubudlelwano nama-alumni, abangani, nomphakathi omkhulu ukweseka inhloso yesikole yokulungiselela abafundi ukuthi basebenzise imfundo ephakeme emisebenzini yabo yomuntu siqu, yobungcweti neyomphakathi. Labo abahlotshaniswa neHodges University bayaqonda ukuthi lesi sikole sehluke ngempela. Kungumphakathi ohluke ngokumangalisayo ogcwele abantu abanezintshisekelo nemisebenzi ehlukahlukene.
Lapha, azikho izindlela ezimbili ezifana.
Kepha, into eyodwa esivumelana ngayo echaza indawo yethu, ukusebenza kanzima nesifiso sokwenza izinto ezinkulu, ukuqhubekela phambili, nokuzakhela impilo engcono, imindeni yabo kanye nomphakathi.
Uma usuxhumene neHodges University, kuyimpawu ecacile yokuthi ungumholi owamukela ubugagu bangempela.
Ngabafundi abangaphezu kwezi-6,000, ama-Corporate Educational Alliances ethu akhulayo, kanye nokuxhumana kwethu kwe-B2B, sizibophezele ukukusebenzela kahle ngemuva kokuthweswa iziqu noma njengozakwethu womphakathi. Ukuhlangana kwakho neHodges University kubalulekile kithi, futhi sifuna ukuzwa kuwe.
Okuhlangenwe nakho kwakho, kungaba ngumfundi noma njengomngane, kubalulekile ekukhuleni kwethu nasemizamweni yethu yokuthuthuka. Sicela usigcine wazi ngalokho okwenzayo manje nangezindlela ozibona ngazo IHodges University ukuqinisa iqhaza layo emhlabeni wakho… futhi-ke, vakashela kaningi!
Umsekeli weHodges University uyaqonda ukuthi isipho sabo simayelana nokugcina umphumela wokugcina engqondweni. Imayelana nokunikeza ukusekelwa okudingekayo, ngesikhathi esibucayi kakhulu, kumuntu, ukuze bakwazi ukuqedela umgomo wabo- inhloso eyitshe legumbi lokwenza izimpilo zabo nomphakathi wabo ube ngcono. Sonke siyazi ukuthi imfundo ingashintsha impilo nokuthi ushintsho aluzi eqolo.
Kepha, lelo banga noma isitifiketi esitholakele asisoze sathathwa futhi lokho umuntu akufezile kwakhe ilungu elisha lomphakathi wethu.
Ngukusekelwa kwakho, lokho okukhona, futhi okuzoshintsha umkhondo wezimpilo.
Asikwazi ukubonga ngamunye wenu ngokwanele ngalokhu kusekelwa kepha sicela nazi ukuthi sizozama!
Hlala uphephile! Futhi sicela uhlale uthintana!
Ukwabelana ngenhlangano yakho yeHodges University noma ukufunda kabanzi ngezindlela ongaxhasa ngazo umfundi waseHodges University, sicela uxhumane no-Angie Manley, uMqondisi we-University Advancement, 239.938.7728 NOMA nge-imeyili ku amanley2@hodges.edu.
Sicela uchofoze kusixhumanisi esingezansi ukukhombisa ukuxhaswa kwakho namuhla!